Apple dia manana fidirana Mac foana ho an'ireo mpampiasa manao ny diany | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manana Mac ambaratonga fidirana foana ho an'ireo mpampiasa manao ny dingana
Amin'ny maha mpampiasa Mac ahy ahy dia matetika misy olona fantatro manontany ahy ny zavatra niainako tamin'ny Mac, satria mieritreritra ny hanova fitaovana izy ireo ary liana hahafantatra ny fomba fiasan'ireto solosaina ireto. Amin'ny lafiny iray dia milaza izy ireo fa miasa mahafinaritra izy ireo, fa etsy an-daniny dia mametraka ny vidiny. Raha tsy hoe mpampiasa matihanina ianao, Tonga hatrany amin'ny fanoroana hevitra azy ireo aho hividy Mac fototra na mpanelanelana, ka izy tenany mihitsy no manome lanja ny zavatra niainany. Aorian'ny fitsapana dia afa-po tanteraka ny mpampiasa ary miafara amin'ny fanatsarana na fividianana vokatra hafa. Fantatr'i Apple ihany koa fa io no vavahady ho an'ny mpampiasa marobe ary mametraka toerana Mac sasany.
Azontsika atao ny milaza fa ny 1000 € ny sakana fidirana, raha mila Mac vaovao isika. Marina fa mety ho vola somary avo ho an'ny mpampiasa iray izay ny fampiasana azy dia ny fizahana, handefa mailaka, hanoratra ary hanovana antontan-taratasy. Fa etsy ankilany, manana ekipa manana kalitao avo indrindra avy amin'ny maodely fototra indrindra izy. Ary tsy miresaka momba ny singa na ny endriny fotsiny isika, izay mety ho antony lehibe kokoa. Miresaka momba ny vatosoa amin'ny satro-boninahitra isika, toa ny MacOS. Ary ilay Mac fototra indrindra no manana ny iray amin'ireo rafitra fiasa mandroso sy azo antoka indrindra eto an-tany. Azo antoka fa, rehefa mihoatra ny ora fampifanarahana ilay mpampiasa vaovao, dia ho sarotra aminy ny hiverina amin'ny fitaovana taloha, raha miresaka rindrambaiko isika.
Saingy miresaka momba ny vokatra izahay. Manana safidy telo izahay: Araraoty ny efijery solosaina teo aloha, ary safidio ny Mac Mini. Mahazoa ny fahombiazan'ny solosaina birao avy amin'i Apple, iMac na safidio ny safidy azo entina, miaraka amin'ny MacBook Air efa ela.
El Mac Mini, manana vidiny fidirana mirary aza izy io. Manomboka amin'ny € 549 dia afaka miditra ao amin'ny klioban'ny Mac isika. Manana ekipa kely izahay, saingy miorina amin'ny processeur Intel Core i5 1,4 GHz miisa roa, RAM 4 Gb ary kapila kapila 500 Gb.
Tamin'ny fehezan-teny farany Apple dia nahazo fahagagana mahafinaritra isika, satria ny iMac 1.299 € fotsiny ny manomboka. Mety ho toa be dia be izany, saingy manana processeur Intel Core i5 miorina 2,3 GHz izahay, afaka mahatratra 3,6 GHz, RAM 8 GB ary fahatsiarovana anatiny 1 TB. Mazava ho azy fa manana ny zavatra rehetra ilainao hialana ianao ary handehananao: fampisehoana retina avo lenta, Magic Mouse ary Magic keyboard.
Ary farany, raha toa ka findainao ny solosaina finday dia azonao ampiasaina ny iray amin'ireo solosaina izay tsy hain'ny mpampiasa Mac indrindra, ny MacBook Air. Ekipa mahatanty ny fandehan'ny taona sy ny a fanadihadiana nataoko avy amin'ny Mac, herinandro vitsivitsy lasa izay, tsy tian'ny mpampiasa hanjavona izany. Noho io antony na antony hafa io dia manana an'io ao amin'ny katalaoginy i Apple. Mety amin'ny fiasana an-tongotra, noho ny refy sy ny lanjany. Mety ho an'ny sekoly izy io, ary mazava ho azy ho an'ny olona vao manomboka. Ho an'ny 1.099 € dia manana an'io vatosoa kely io ianao, izay miorina amin'ny processeur Intel Core i5 1,8 GHz, 8 Gb RAM ary 128 Gb an'ny SSD ao anaty fahatsiarovana.
Amin'ity fampahalalana rehetra ity dia tsy hanana fialan-tsiny ny namanao na ny namanao raha hiova amin'ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Apple dia manana Mac ambaratonga fidirana foana ho an'ireo mpampiasa manao ny dingana
Gema Lopez dia hoy izy:
Azo antoka fa namela maodely telo mahavariana ho antsika ny Jobs, iMac, MacBook Pro, MacBook Air 
Valiny ho an'i Gema Lopez
Fampiharana 3 atolotra hampiroborobo ny vokatrao sy hankalazana ny Summer Solstice
Ankafizo ny sary an-tsary hafa isan'andro miaraka amin'i Splashy